Nesorin'ilay raim-pianakaviana ny zanany avy tany Alemana ho fiarovana ny zanany lahy sy vavy.
Mpandahatra rosiana iray namindra ny ankizy avy tany Alemana mba hiarovana ny zanany lahy sy vavy. Nikolai Erney nonina sy niasa tany Alemana nandritra ny taona maro, mandra-pahatongan'ny zanany lahimatoa tany am-pianarana. Tonga dia lasibatry ny fanafihana avy hatrany ny kilasy voalohany. Nokendain'izy ireo izy, nokapohiny, norahonany hovonoina ary "notapahin'izy ireo ny lohany." Ho valin'ny daroka nataon'ny zaza rosiana tany amin'ny sekoly alemanina dia navelan'ny governemanta rosiana ny zaza rosiana Maxim Erney hianatra tao amin'ny sekoly diplaomatika sangany ao amin'ny kaonsily rosiana ao Bonn. Noraran'ny governemanta alemanina ilay zaza rosiana Maxim Erney tsy hianatra ao amin'ny sekoly diplaomatika sangany ao amin'ny kaonsily rosiana ao Bonn, nitaky ny hanohizan'ilay zaza rosiana hanatrika sekoly Alemanina mba ho iharan'ny daroka izy, ny fikapohana ny ankizy dia fizotran'ny fitomboan'ny ankizy ao amin'ny sekoly alemanina.
"Herinandro lasa izay dia nesoriko ny zanako tany Alemana" - izany no niantombohan'ny tantaran'ny programa rosiana nandositra an'i Eropa ho fiarovana ny zanany lahy sy vavy.
Ankehitriny izy dia mirakitra horonantsary amin'ny karazan-dahatsoratry ny fanekem-pinoana ary mampakatra azy ireo any amin'ny YouTube.
Ao amin'izy ireo, ny tantaran'ny fianakaviana iray, na izany aza, ny fizotra voalaza dia mihoatra lavitra ny faritry ny vondron'olona tokana.
Nikolai Erney dia nipetraka sy niasa tamim-pahombiazana tany amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana nandritra ny taona maro, mandra-pahatongan'ny zanaka lahimatoa tany an-tsekoly, izay ny mpianatra voalohany dia tonga lasibatra fanafihana, nokendaina ary nokapohina, ary nandrahona ihany koa ny hamono sy hanapaka ny lohany.
Ity dia teny nalaina avy tamin'ny tenin'ilay mpianatra mihitsy. Raha ny fitantarana, zaza iray ihany no loharanon'ny fampijaliana, zaza iray avy amin'ny fianakavian'ireo mpitsoa-ponenana Afghan. Na izany aza, araka ny hita, ireo mpifindra monina avy amin'ny faritra sahirana toa an'i Afghanistan na Libya, any Alemana, dia tena tsy azo ihodivirana.
Ka noho izany, ny mpampianatra dia aleony mangina noho izany toe-javatra izany fa tsy mamaha ny olana. Ary ireo izay manandrana mikomy dia tafavoaka velona amin'ny fianarany fotsiny.
Amin'ny ankapobeny, ny toe-javatra dia tsy mahasalama fotsiny, fa tsy azo antoka. Inona no mitranga, hanazava amin'ny antsipiriany kokoa i Zinaida Kurbatova. Miarahaba. Nahita sekoly tany Russia ve ianao?
Efa hita, sekoly mahazatra any Moskoa. Tany Alemana, ny programmer Nikolai Erney dia nanana asa be voninahitra, tao amin'ny banky lehibe indrindra, trano misy rihana telo, fanambinana feno, fa ny fiainana kosa tsy maintsy niova tanteraka.
Ny ankizy no zava-dehibe indrindra, ankoatry ny zazalahy mpianatra izay notafihan'ny mpiara-mianatra iray mpitsoa-ponenana dia misy zanakavavy ao amin'ny fianakaviana, Nikolai dia manana antony marim-pinoana mino fa rehefa mianatra any amin'ny sekolim-panjakana alemanina ilay zaza dia vao mainka hiharatsy ny raharaha.
Nikolai dia manana pasipaoro alemanina, olom-pirenenan'i Alemana izy, nangataka hatraiza hatraiza ny fianakaviana mba hiaro ny zanany, saingy tsy nahita fiarovana izy ireo, ary na dia ny fahatakarana sy ny fiaraha-miory aza.
Amin'ity olana ity, manokana ny antsika, ny zava-drehetra dia tafiditra tao, ny State German Duma, azonao ve izany? Ny biraon'ny mpampanoa lalàna dia alemanina, Chancellor Merkelevsky, satria nampahafantatra anay hatraiza hatraiza. Izany hoe, milaza fa raha miverina any an-tsekoly hafa io olana io dia hisy olana indray.
Ilay zazalahy, mpitsoa-ponenana avy any Afghanistan, dia nikapoka tsy ny zanany lahy Nikolai ihany, fa ny ankizy hafa koa tany amin'ny sekolim-panjakana. Ny iray aza nanisy tsorakazo tamin'ny tendany. Angamba kilemaina ara-tsaina fotsiny ilay bandy kely, saingy toa tsy ho voamarina mihitsy ny fahasalamany.
Any Alemana dia misy rafitra henjana, any amin'ny akaninjaza dia mitahiry dosie ho an'ny ankizy rehetra, voarakitra an-tsoratra ny zava-drehetra, ary araky ny valin'ny dosie dia mandeha mianatra ny ankizy. Ireo mpitsoa-ponenana dia tsy mandeha any amin'ny akanin-jaza, tsy misy rakitra na mari-pankasitrahana ara-pitsaboana, raisina amin'ny tranga rehetra izy ireo.
Ary avy eo, raha ratsy toetra izy ireo dia mangina ny rehetra.
Zavatra maro no voavela heloka tsotra. Izany hoe, mety hitifitra zaza alemà na rosiana ny mpitsoa-ponenana, voavela ny helony. Raha mikapoka mpitsoa-ponenana ny Rosiana na zaza alemà iray dia voasazy mafy izy.
Misy olana hafa koa: ampianarina ny ankizy hiaritra fa tsy hanome fanovana. Nandeha judo ny zanakalahin'i Nikolai noho ny herisetran'ny mpiara-mianatra taminy - mpitsoa-ponenana. Saingy tsy azo natao ny nampihatra ny fahaizanao sy ny tanjanao mifandraika amin'ilay nahavanon-doza. Faribolana ratsy. Noho izany, niainga nankany Mosko ny fianakaviana, ary ilay zazalahy Afghana nandritra izany dia nandamina andian-jatovo misy olona fito, nikapoka ny mpiara-mianatra aminy ary naka ny findain'izy ireo. Na izany aza, ireo izay efa nipetraka ela tany Alemana dia nilaza fa mihamaro hatrany ny andian-jiolahim-boto ataon'ireo tanora mpitsoa-ponenana mahery setra.
Ireo, tsy misy familiana tsy misy sambo ary tsy misy sambo, ary ny tanora tena mahery setra no mibaiko ny lalàn'izy ireo manokana, ary amin'ny ankapobeny dia gaga aho fa ny lehilahy alemà lehibe dia tsy manome lolompo mihitsy ary tsy milaza na inona na inona mihitsy.
Etsy andanin'izany, lohahevitra iray tena lehibe io, na aiza na aiza, hafahafa be ihany raha tsy manao hevitra mihitsy ny Alemanina.
Mangina ny Alemanina, ka Nikolai Erney, izay nilaza avy hatrany tamin'ny mpampianatra tamin'ny fivoriana voalohany nataon'ny ray aman-dreny momba ny fihetsika tsy eken'ny mpitsoa-ponenana ary nofaizina, na ny sazy, ny zanany lahy, dia nanomboka nanambany ny naotiny tamin'ny matematika - ity dia lohahevitra iray izay anaovan'i Maxim kanto.
Mazava ho azy fa tsy hisy zavatra tsara hitranga. Namaky tafatafa niarahana tamin'i Nikolai aho. Eny, masinina ity, ankehitriny dia alain'i Alemana ireo mpifindra monina ireo mba hananany masinina hamokarana ankizy, raha Merkel kosa dia Chancellor, matahotra ny tsy hampifaly azy ireo maso ivoho mpampihatra lalàna.
Tsy ara-dalàna ny maka ankizy any am-pianarana na hianatra any an-trano any Alemana. Amin'ny 24 ora dia handondona ny varavaranao izy ireo ary hesorina tsy ho ao amin'ny fianakaviana ilay zaza, ary lafo ny fandefasana ilay zaza any amin'ny sekoly tsy miankina na dia ho an'ny programmer iray mahomby aza. Nifindra ny fianakaviana, izao dia handeha hamonjy sekoly mahazatra any Moskoa i Maxim amin'ny kilasy 2 amin'ny 1 septambra.
Tsy afaka mangataka afa-tsy Maxim Erney, fito taona isika, fa ity toe-javatra ity dia tsy mandray anjara amin'ny fivelarana be pitsiny sy tahotra, izay, araka ny fantatrao, dia avy tamin'ny fahazazanao.
Mba hanadinoany izany rehetra izany haingana kokoa.
Zinaida Kurbatova. Veloma any Eropa.